Dhawunirodha YouTube mavhidhiyo pasina kudiwa kwechero app | IPhone nhau
Dhawunirodha mavhidhiyo eYouTube pasina kudiwa kweapp
Hatina kumira mumazuva achangopfuura kuti tikutaurirei dzese nhau nezve Apple brand: wongororo yeApple TV nyowani, doko idzva repamutemo reApple Watch, uye kunyangwe zvese zvakaitika pakutangisa kweiyo nyowani (uye neimwe yakasarudzika) iPad Pro, nhau dzichangoburwa dzaApple dzevanofarira. Zviripachena kuti hazvisi zvese zvaizove Apple nhau, isu tinodawo kuunza kwauri dzimwe dzinonakidza nhau nezve tekinoroji zvakajairika, nhau idzo dzimwe nguva dzidziso uye dzinogona kukudzidzisa iwe kufamba nenzira yehunyanzvi nyika zviri nyore.
Nezuro chaiye kumusangano wevanyori veIpad Actualidad (isu tine misangano) isu takataura pamusoro pe Zvakanakisa kunyorera kurodha YouTube mavhidhiyo, zvinonakidza zvinoshandiswa (zvakawanda zvakabhadharwa) zvaunogona kusevha kana iwe ukashandisa nzira inoshanda neinternet oparesheni ... nhanho dzekutevera kuti ukwanise kurodha mavhidhiyo eYouTube kuMac yako pasina kudiwa kweapp yekuwedzera.
Chekutanga chitaurira iwe izvozvo nzira iyi haisi pamutemo, uye izvo zvinokurudzirwa chero, mavhidhiyo anotambirwa pamaseva eYouTube uye pese paunenge uchiona imwe kuburikidza newebhu ivo vari kuchengetwa se cache pane yako Mac .Nenzira iyi iwe kuwana iyo cache kune chero saiti iwe yaunoda kuiona isingaenderane pese paunoda.
Izvo iwe zvaunoona mune yepamusoro kubata ndiyo nhanho yekutanga, iwe unofanirwa kuwana vhidhiyo iri mubvunzo mukati meYouTube Kuti uwane URL yayo, ndiko kuti, uri kutarisa vhidhiyo paYouTube uye uchida kuikanda, tarisa iyo URL iri mubara rekero yeSafari kana bhurawuza raunoshandisa (muS Safari nekudzvanya pane URL yekuisa bhokisi ichaita kuoneka kwakakwana).
URL inodikanwa kuti uwane iyi yekuodha nzira kuburikidza newebhu. Zvatichaita panguva ino zvichave isa mavara "ss" pamberi peshoko youtube. Pazasi iwe unogona kuona muenzaniso:
Iwe unodzvanya pinda uye uchaendeswa wakananga kuSavefrom.net webhusaiti (Unogona zvakare kushandisa sevhisi nemamwe masevhisi masevhisi), sezvaungaona pazasi ...
Nhanho inotevera iri nyore kwazvo. Sezvauri kuona mune yapfuura skrini, iwe uchaona iyo vhidhiyo iwe yaunoda kurodha pasi uye bhatani nayo mhando dzese dzevhidhiyo dzaunogona kurodha pasi kuburikidza neSavefromIwe unogona zvakare kusarudza iyo vhezheni yacho chete neodhiyo. Ukangosarudza mhando yefaira iwe yaunoda kurodha pasi, uchafanira chete tinya bhatani «Download» uye vhidhiyo inozotora kuMac yako.
Maitiro ari nyore nyore ayo Ichakuchengetedza iwe kuzadza Mac yako nemaapplication, uye zvinokutorera iwo ese mavhidhiyo aunoda kuti ugone kuaona asiri-pamutsetse.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Dhawunirodha mavhidhiyo eYouTube pasina kudiwa kweapp
Izvi zvinei chekuita neiyo iPad «iOS»? Izvi zvingave zvirinani pane "parizvino Mac"
Ini ndichifunga kuti zvinogona kuitwa kubva paPad .. Izvo zvinosuwisa sei!
Sezvatinoita kwatiri, ndinoishandisa paPadad, inonzi chirongwa chePurasitiki uye chikamu che Photoshop uye ine logo uye handizive kuti inobviswa sei, mune yangu takatenga mbiri kana katatu uye tsaona handizive kuti sei kubvira pandakanga ndine imwe iPad uye ndikatenga nekukurumidza Uye zvakaitwa, zvaive zvakanaka, asi kwete izvozvi, uye José, kana aine iyo iPad, iri nyowani kana kuti handizive kuti sei.
Ndokumbirawo zviitwe sei?
Pindura kuna desmodus02
Zvakanaka zvinozivikanwa kuti Apple haina kukosha vrg zvachose .. asi iyo saiti kubva mumambure haina kukosha vrg kana, haishande chete mune mamwe mavhidhiyo
Wati waona Google Egg Pasita paStar Wars?
Google Drive inogadziridzwa nerutsigiro rwe 3D Kubata uye zvimwe